German | Otu Di na Nwunye
Mee 24, 2019 + Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, German, Germany, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka
German Jagerschnitzel Ntụziaka
Nke a dị iche iche na schnitzel a ma ama nke Germany na Austria bụ Jagerschnitzel - azu anụcha ma ọ bụ anụ schnitzel nke e ji ihe omimi, nke bara ọgaranya, ihe oriri. Na efere, n'onwe ya, gbara ọchịchịrị ma na-enye afọ ojuju, ikekwe otu n'ime ọkacha mmasị anyị na-adaba na schnitzel German omenala. Ọ bụ ezie na uzommeputa anaghị akpọ maka ya, ị kwesịrị n'ezie tụlee na-agbakwunye otu ịgba nke ama German liqueur ... GỤKWUO
Mee 4, 2019 + culinary, Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, German, Germany
Nri kacha mma iji nweta na Germany
Ị bụ onye a hụrụ amara anụ? Naanị ma eleghị anya na-eme atụmatụ njem na Germany ma na-eche otú ị ga-esi nweta obodo ahụ site na nri ya? Mgbe ahụ na-ekele gị, ị kụrụ otu jackpot! Germany maara nke ọma maka nri ya na efere ya na anụ. Ya mere, gịnị ka anyị na-eche? Ka anyị chọpụta efere kachasị mma iji nweta na Germany! Sauerbraten Sauerbraten bụ otu ... GỤKWUO
April 12, 2019 + Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, German, Germany, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka
Ị nwere ike ịkele Baron Holstein maka kpochapụ a na-eji ihe oriri German Wienerschnitzel a ma ama. Holstein, onye a mụrụ Friedrich August Karl Ferdinand Julius von Holstein na 1837, bụ onye ọrụ obodo nke Alaeze Ukwu Germany n'oge 19th century, na rumor nwere na e kere ya ejiji a n'ihi na ọ na-enwe mmasị maka egg na anchovy na schnitzel. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ... GỤKWUO
March 17, 2018 + Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Germany, Ireland, Scotland, Spain
Ntuziaka 7 Delicious & Simple Beer-Based International Recipes
Maka ndị enyi anyị niile na-ahụ n'anya n'ebe ahụ na-agagharị ụwa, ebe a bụ ntụziaka ole na ole dị mfe, na-atọ ụtọ, na ọ bụ ntakịrị boozy! Anyị na-enwekwa mmasị ịkụ nri, yabụ, olee ụzọ kachasị mma isi tinye ihe ndị anyị hụrụ n'anya karịa ịnwale ezi ntụziaka na ịkụcha nri na mba ọzọ! Gbalịa ole na ole n'ime ihe ndị a na-esote nri abalị ọzọ, ma kpoo ha ... GỤKWUO